Taariikh nololeedkii abwaan mohamed xaashi dhamac gaariye oo kooban – The official Somali Historical
Xaasha ee af tahanimo.
Hadii uu xabaal galay .
Abwaankii xidigin jiray.
Murtidii xag loo dayo.
Xulashada ahayd iyo.
Ayaa xarafkii hoosdhabi.
Faraskii xiddigaysnaa xakamaha ayaa sudhi?
Mohamed xaashi ka socoye somalaay waynakaa
Previous: Dib u eeg Nolosha gaarka ah Amina Muse Weheliye, Daawo Barnamijka Soo dhaweynta aamina
Next: Taariikh Nololeedka Maxamed Cabdulahi Maxamed Farmaajo